Omunye bezijabulisa kakhulu futhi owaziwa ikhadi imidlalo emhlabeni kuba poker. Njalo ngonyaka kuzo zonke izingxenye zomhlaba kuba abalandeli bayanda lo mdlalo ikhadi kuyajabulisa. Futhi ekwandeni inthanethi poker play sekulula ngisho naye. Izinhlobonhlobo athandwa kakhulu lo mdlalo elikhangayo liyisibonelo Texas Hold'em. Abantu abaningi banesithakazelo kanjani i-poker. imithetho yalo mdlalo kungafundwa ngesikhathi esifushane, nokuthuthuka kwabo ngeke kubangele izinkinga ezingathi sína. Ukuze uqonde kangcono Psychology poker, kungcono ukufunda umlando wawo.
Phakathi theorists poker kungekho ukuvumelana mayelana nomsuka walo mdlalo ikhadi. ukwaziswa okunokwethenjelwa mayelana nalokho kwaba kwandulela poker umdlalo, alikho. Abacwaningi ayavuma ukuthi kuwufanele a Symbiosis of imidlalo ikhadi eziningana.
Abanye abantu bakholelwa ukuthi i-poker, athandani kakhulu ukugembula lasendulo eladabuka China okweshumi AD leminyaka. Esikhundleni amakhadi Chinese esetshenziswa Dominos kanye nephethini ekhethekile. Kuphinde futhi kube kwandulela poker kungaba German umdlalo «Pochspiel» Indian noma 96-ikhadi umdlalo «Ganjifa». Lo mdlalo futhi imithetho poker has ezinye izici ezifanayo kanye lezi izinguqulo zasendulo.
ukhokho Cishe ka poker injalo sethu umdlalo French xv ekhulwini ngokuthi «Pogue». Gameplay Sasebenzisa amakhadi 52 (njengoba esikhathini samanje) futhi jokers ezine. Umdlalo kuhlanganisiwe zokubheja futhi bluffing ithuba. It is kuleli fomu ke kwalethwa by abahambi French eCanada, bese-United States.
Futhi uyakuthanda basebenza empini ngesikhathi kulwiwa. Nokho, sikakhokho ka nothayi banamuhla poker, okuyinto awunika igama lokuthi umdlalo kubhekwa kuJonathani Green, ngubani ejele baye bafunda indlela i-poker. Imithetho wafunda izindophi, ngoba wayengumuntu fan wangempela waleli game ethokozisayo.
Texas Hold'em: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
Kukholakala ukuthi okokuqala e-Texas Hold'em kukhala e Robstown edolobheni, okuyinto Yiqiniso, e-Texas, ngo-1900. Kusukela ngaleso sikhathi, kwathatha isikhathi eside, futhi won eziningi poker abalandeli - (. English World Series of Poker) Sibonga kakhulu ku-World Poker Series. Ngokokuqala ngqá kule injabulo iholide owaqhutshelwa e-Las Vegas (ikhasino "Ukhamba") futhi namanje ukuqoqa izihlwele emhlabeni wonke.
Uyokwanelisa isifiso sabo abantu abaningi ukudlala i-poker, kanye nokuthuthukiswa ubuchwepheshe-intanethi ekunika amandla yokuqhuba imidlalo tournaments ikhadi inthanethi. Amawebhusayithi amaningi anika isevisi ye tournaments inthanethi futhi imali umdlalo poker, kusukela nineties kwekhulu lamashumi amabili.
Idlalwa kanjani i-poker? Obusa poker imidlalo
Kukhona izinhlobonhlobo eziningana zanamuhla umdlalo:
1. Texas Hold'Em (Texas Hold'em). Imithetho Texas Hold'em elula kakhulu, ngakho inani abalandeli yalesi ezihlukahlukene kufike komkhulu wabo. Umdlali unikezwa amakhadi amabili ezandleni zayo. Kuyadingeka ukuqoqa inhlanganisela esiqine amakhadi emihlanu, okungukuthi, ungakhetha ezimbili zabo, okuyinto zidingidwa ubuso phansi emphakathini ezinhlanu abekwa etafuleni.
2. Omaha (Omaha). Umgomo we umdlalo - kuyafana Hold'em, kodwa isandla asebenzelana amakhadi ezine, ezimbili zazo kumelwe nakanjani iqhaza ekulungisweni inhlanganisela. Enye Omaha kuyinto Omaha Hi / Lo (Omaha Hi-Lo), isici okuyinto ukuthi ekupheleni ngidayisa ebhange ngokuwina ukwehlukana abadlali kanye eziqine futhi inhlanganisela sibuthaka kakhulu.
3. 5 Ikhadi Draw (ezinhlanu-ikhadi ukudweba poker) - kuyinto bendabuko kanye endala uhlobo poker. Ngakolunye uhlangothi asebenzelana ubuso phansi amakhadi emihlanu, futhi abaphikisi abanalo ithuba ukubona amakhadi umphakathi, okuyinto nzima ukuthi kungenzeka ukuqagela inhlanganisela oyifunayo.
4. Seven Ikhadi Stud (Seven Ikhadi Stud). Poker Imithetho ukuhlinzekela ukusatshalaliswa amakhadi eziyisikhombisa ukuba umdlali ngamunye. Nokho, ezintathu zidingidwa ibheke phansi, kanye ezine - bukhanye. Umdlali futhi luyinhlanganisela amakhadi emihlanu.
Kukhona futhi ezinye izinhlobo zamakhiwane poker, kodwa abawona ithandwe.
Uma kungenzeka, ukwandisa izinga futhi indlela yokwakha imithetho yebhange umdlalo poker zibandakanya izinhlobo ezilandelayo Hold'em:
1. Lungisa umkhawulo - usayizi ukubheja is nomkhawulo round ngamunye inani elithile kusengaphambili.
2. Umkhawulo Pot - inani abadlali ukubheja ayikwazi ukudlula inani ebhange.
3. Awukho umkhawulo - ukubheja umdlali awugcini.
4. Mixed - uhlobo ukubheja umkhawulo nokunye nge angenamkhawulo egxilile futhi okuphambene nalokho.
Nguyena futhi ezihlukahlukene inhlanganisela
Kungakhathaliseki esikhethiwe poker inhlanganisela imithetho ikhadi bese ubudala ahlale. Ngakho, isigaba sabaphathi inhlanganisela ikhadi kanje.
isinyathelo Okungenzeka abadlali
Texas Hold'em Poker Imithetho ukuhlinzekela izenzo ezilandelayo abadlali ngesikhathi endalini:
1. Bet (Bet) - ukubheja umdlali ehlasela sika ngokungabi bikho amazinga phambi kwakhe.
2. Call (Call) - zokulinganiswa yamazinga wabadlali odlule.
3. Likhuphuleni, kabusha kukhushulwe (ukukhulisa, kabusha kukhushulwe) - ukwanda izinga labadlali odlule.
4. Fold (pass) - isenzo esimele yokusetha kabusha ikhadi nokwenqaba uqhubeke umdlalo kuze isandla esilandelayo.
5. Hlola (isheke) - zero isilinganiso, okuxhunyanwa ethutha ilungelo umdlali elilandelayo. Hlola ku bonke abadlali kwenza kube nokwenzeka ukubona ikhadi esilandelayo mahhala.
6. Zonke-e (zonke-e) - Izinga alinganayo kuyo yonke chips umdlali. Beka amandla njengobufakazi bokuthi yezandla zabo, noma uma inombolo chips umdlali lingaphansi kuka ukubheja abaphikisi odlule.
Ikhadi ukusatshalaliswa - ukuqala umdlalo
Ekuqaleni nqwaba umdlali ngamunye asebenzelana "ephaketheni» (imbobo) amakhadi amabili, okuyinto kakhulu kusengaphambili ukuthi amathemba esikhathi esizayo wokusabalalisa. Ukuhlaziya amakhadi asebenzelana futhi isikhundla womdlali at phambili etafuleni esiphethweni mayelana amandla ngesandla kanye nesidingo ukuze uqhubeke umdlalo noma ukusetha kabusha ikhadi sidlule. amakhadi ezifanayo abasezikhundleni ezahlukene kungaba nomphumela ohluke ngokuphelele.
Kungani ukubeka amakhethini
Into eyenza lohulumeni Poker kunendingeko zonke isandla ukwenza kubhejwa bephoqeleka. Lokhu kwandisa Dynamics of the game nokugembula bebonke. Khona - Imininingwane ibaluleke kakhulu kulabo abafuna ukufunda ukudlala poker. Imithetho yaleli game kuhilela isikhundla nomthengisi, okuyinto ngokomfanekiso Kubonisani chip ezinkulu (inkinobho) bese ihamba kulo mdlalo ohlangothini ngokwewashi. nomthengisi isikhundla iyona ethembisayo futhi engabizi, njengoba eshiya umdlali ilungelo abahambayo odlule.
abadlali ababili abangekho ngemva induku, babe ngcolile khundla, ngoba kumelwe wenze kubhejwa bephoqeleka, kungakhathaliseki ukuthi amabutho basakaza izandla zabo. Kusukela iminikelo yabo, ngokuthi amakhethini (izimpumputhe), kwakhiwa ibhange yasekuqaleni.
Ngakho, umdlali wokuqala ukwenza ibhidi saziso, kuyinto kwesokunxele umthengisi libizwa izimpumputhe ezincane (izimpumputhe elincane). Lokhu kulandelwa enkulu izimpumputhe (BB) - umdlali, izinga saziso okuyinto izikhathi ezimbili obukhulu kunobukaJohane izimpumputhe encane. Emva kokuhlela amazinga saziso, abadlali ababili bathole inkululeko egcwele isinyathelo.
Eyokuqala ukubheja round, lapho kubhejwa ezibekwe, kuye ngokuthi amandla ezandleni asebenzelana, futhi isikhundla kusitikhi. Uma amakhadi ayinawo amandla noma isikhundla disadvantageous, kungcono kabusha ikhadi sidlule. Kwezinye izimo kungenzeka nokulinganisa, noma ziphakamise ukubheja ukubeka yonke chips zabo. Ngemva eyakha lesi round ukubheja is yibhange eyinhloko.
I flop (flop) anikezwa futhi abekwa phezu amakhadi umphakathi etafuleni ezintathu, okuyizinto kumiswa inhlanganisela eyinhloko nemibomo (core) ekuhlanganisweni. Ebona lokhu, abadlali benze izinqumo ngamandla amakhadi abo (ekhona abangaba), futhi ngumuntu wesibili ukubheja round.
Isinyathelo esilandelayo, okuyinto ukufinyelela akubona bonke abadlali iyona ithuba (ithuba). Ingabe abeke etafuleni ikhadi omphakathi siseceleni (kakade yesine). Bonke abadlali abangazange eligoqiwe pass, e okufanayo ngendlela kubhejwa usebenzisa ongakhetha esisanda kuxoxa ngazo.
Ngesikhathi esigabeni sokugcina ukuqhudelana zibekwe phezu kwetafula, ikhadi yesihlanu, ngokuthi komfula (emfuleni). Manje bonke abadlali akhiwa ngokugcwele inhlanganisela. Wawunamafutha round lokugcina ukubhida, okuletha ukucaciseleka maqondana nokwabiwa onqobile.
A Yimpi ukucacisa winner
Ngemva kwezinsuku zokugcina ukubheja round kunqunywa winner, oyokwenza okuthile ngale ebhange uqobo. imithetho Poker Wabasaqalayo bathi ekulungiseleleni inhlanganisela umhlabeleli wabadlali ingasetshenziswa njengendlela ephaketheni amakhadi 2, futhi wabelane ngemuva etafuleni. Ophumelele yilona Umdlali inhlanganisela best of amakhadi emihlanu. Futhi abadlali ungaba amabhange kanye ukulingana phakathi amabili inhlanganisela yakho kokubili, kanye phakathi abadlali eziningana (yokuhlukanisa-ebhange).
Ukufunda imithetho poker kuzovumela ukuba shí ezweni injabulo umjikelezo yokubheja inhlanganisela nezandla enhle.
Indlela yokukhetha i-parrot ye-wavy. Amathiphu alula
Yini engenziwa emkhathini? Mayelana kwezimo ezingajwayelekile zokuphila okungalé koMhlaba